INDLU ESELWANDLE, beach dream 50m, 2 BR, 4 people
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguPeter
Eli khaya lincinci leeholide ngaselwandle likumgama oziimitha ezingama-50 kuphela ukusuka elunxwemeni eSalema, elathiywa igama le-15 kumanxweme angama-50 awona mahle kakhulu emhlabeni yiThe Guardian. Indlu yangaphambili yabalobi enentendelezo engaphakathi kunye negadi iye yalungiswa ngothando kwaye inika ubumfihlo kunye namagqabantshintshi okwakha ukuya kuthi ga kubantu abane. Iqula elincinane lokuhombisa (elingelilo elokuqubha) lijikeleza kwindawo epholileyo. Incwadi esandleni, iinyawo emanzini abandayo - ukuphumla okucocekileyo.
Eli khaya lincinci leeholide ngaselwandle likumgama oziimitha ezingama-50 kuphela ukusuka elunxwemeni eSalema, elathiywa igama le-15 kumanxweme angama-50 awona mahle kakhulu emhlabeni yiThe Guardian. Indlu yangaphambili yabalobi enentendelezo engaphakathi kunye negadi iye yalungiswa ngothando kwaye inika ubumfihlo kunye namagqabantshintshi okwakha ukuya kuthi ga kubantu abane. Iqula elincinane lokuhombisa (elingelilo…
“I-oasis encinci yokuphumla ngaselwandle. Unokuva umoya kwimithi yesundu kwaye ususe i-surf.”
- Peter, umbuki zindwendwe wakho
Ibhalkhoni, Ibhedi elala abantu ababini
4.90 (iingxelo zokuhlola 97)
Ngaphakathi kweemitha ezili-100 kukho iindawo zokutyela, iibhari, iivenkile, irenti yekayak, ukubhexa kunye nokuthengiswa kweentlanzi kanye emva kokubambisa. ISalema yindawo yokuloba enomtsalane kwaye iihambo ngesikhephe ziyafumaneka elunxwemeni. Kumaphandle, udederhu lweentaba zeMonchique lutsala ngemithombo ephilisayo. Eminye imisebenzi ibandakanya ukukhwela ihashe, i-yoga, amanzi ahlukeneyo kunye neepaki zokonwabisa, imidlalo yasemanzini njengokuhamba ngesikhephe, ukutyibiliza ngejethi kunye nokusefa. ECabo de Sao Vincente unokufumana ukutshona kwelanga okumangalisayo.
Umgama ukusuka eFaro Airport
imizuzu eyi-70 ngemoto xa indlela ingaxakekanga
Inombolo yomthetho: 7219/AL
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Budens